जनतामाझ डा.भट्टराई गृह पृष्ठ
जनतामाझ डा.भट्टराई अरुण बराल काठमाडौं । गत साता बिहान नयाँ बानेश्वरबाट माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई सहितको एक टोली तीनवटा अलग-अलग गाडीमा गोर्खा जिल्लातर्फ लाग्यो । गोर्खा क्षेत्र नं. २ बाट नेपालभरिमै सबैभन्दा बढी भोट ल्याएर चुनाव जितेका डा. भट्टराईको एउटा नयाँ खालको बानी रहेछ, प्रत्येक महिना आफ्नो गृहजिल्ला जाने र मतदाता एवं जनतासित घुलमिल गर्ने । चुनाव जितेपछि उत्तरी गोर्खाका एकाधबाहेक सबै गाविसमा पुगिसकेका रहेछन् । घुम्दै जाँदा गोर्खाको च्याङ्लीमा भने उनी शनिबार १४ महिनापछि पुगेका थिए ।
शनिबार डा. बाबुरामले मन्तव्य दिएको च्याङ्ली गाविसको जनसंख्या करिब आठ हजार पाँच सय रहेको गाविस सचिव आनन्दकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । यस गाविसमा ५२ प्रतिशत कुमाल जातिको बसोवास छ । डा. बाबुरामले मन्तव्यमा भन्दै थिए, \_'यहाँका टारी खेत निश्चित वर्गका हातमा छ, किसानहरू भूमिहीन छन्, त्यसैले जसको जोत उसको पोत लागू हुनुपर्छ । तर, गाविस सचिवका अनुसार पहिले-पहिले बन्दीपुरका नेवार एवं स्थानीय क्षेत्री-बाहुनका हातमा रहेका टारी खेतको स्वामित्वमा यतिवेला परिवर्तन भइसकेको छ । सचिव श्रेष्ठले त के दाबी गरे भने च्याङ्ली गाविसमा मोहीहरू नै छैनन् । पत्रकारले तथ्यांक हेर्न खोज्दा माओवादीले गाविस जलाएका कारण भिलेज प्रोफाइल वा कुनै पनि प्रमाण त्यहाँ रहेनछन् ।
छेउछाउका अन्य गाविसमा पनि माओवादीले कागजात जलाएका रहेछन् । डा. बाबुरामले भनेझैं कृषि क्रान्तिलाई जोड दिन, भूमिको पुनर्वितरण गर्न वा जसको जोत उसको पोत लागू गर्न जसरी उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्वबारे अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसतर्फ माओवादीको कुनै ध्यान गएको पाइएन । बरु माओवादी नेताहरू \_'विकासे मानसिकतामा मात्रै केन्दि्रत हुन थालेको डा. भट्टराईकै मन्तव्यले स्पष्ट पारेको छ ।
तनहुँमा डा. भट्टराईले करिब तीन सय ५० को नाम पढिएकोमा तीन सयजतिलाई टीका लगाएर माओवादीमा प्रवेश गराए । माओवादीमा आउनेमा बढीजसो एमालेका थिए । कार्यक्रममा अर्का नेता सुरेश आलेमगर पनि थिए । डा. भट्टराईको भाषण सुनेपछि मञ्चपछाडि एकजना वृद्ध भन्दै थिए- \_'यो मान्छे सय वर्ष बाँच्नुपर्छ \_'
हुन पनि डा. भट्टराईको जनताप्रतिको लगाव र अर्जुनदृष्टि देख्दा लाग्थ्यो, उनी देशका लागि सय वर्षभन्दा बढी बाँच्नुपर्छ । अन्य पिएचडी गरेका बुद्धिजीवीहरू यतिवेला अमेरिका-युरोपतिर बसेर आफ्नो पेटका लागि सोचिरहेका छन् । यस्तो वेलामा डा. भट्टराई गाउँ-गाउँमा जनताका बीचमा जानु, नेपालीले गर्व गर्नैपर्ने विषय थियो । सम्भवतः: यही कुराबाट प्रभावित भएर होला, च्याङ्लीबाट र्फकने क्रममा पत्रकार रेवती सापकोटाले भने- \_'म स्यालोट गर्छु यार भट्टराईलाई ! सबै नेताले यसैगरी जनतातिर र्फकने हो भने देश स्वर्ग बन्ने थियो \_'
बाटामा एक प्रहरी अफिसरले डा. भट्टराईको गाडी रोके । पत्रकारको टोलीसमेत होटलमा पस्यो र चिसो खाने कार्यक्रम सुरु भयो । ती प्रहरी हाकिमले आफ्नो १२/१३ वर्षको छोरोलाई डा. भट्टराईसित हात मिलाउन लगाए र भने- \_'हेर्, उहाँ नेपालको बोर्डफस्र्ट हो । तैले पनि त्यसैगरी पढ्नुपर्छ । त्यही भएर तँलाई हात मिलाउन ल्याएको हुँ, बुझिस् ?\_' विचरा हाकिम साबले छोरो मात्रै होइन, श्रीमती पनि ल्याएका रहेछन् । श्रीमती गाडीमै थिइन् । आखिर सेतो प्लेटको सरकारी गाडीमा श्रीमती र छोराछोरी हालेर हिंड्नु प्रहरी र सेनाका अधिकारीहरूको पञ्चायतकालदेखिकै रोग पनि त हो ।